कुकुरको दिसाले दुर्गन्धित काठमाडौं, कहिले आउला राजधानीबासीमा चेतना? - Everest Dainik - News from Nepal
कुकुरको दिसाले दुर्गन्धित काठमाडौं, कहिले आउला राजधानीबासीमा चेतना?
काठमाडौं, चैत ९ । मुलुकका सुगम र कतिपय दुर्गम जिल्ला तथा स्थानीय तह मानव दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् तर काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सडक कुकुरको दिसाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सहरका कुकर पाल्नसक्ने हुनेखाने ने घरपालुवा कुकरलाई डोर्याउँदै सडक, गल्ली र छिमेकीको घरको ढोका पर्खालअगाडि दिसापिसाब गराउन अलिकति पनि संकोच मान्दैनन्।
याे पनि पढ्नुस ट्राफिक प्रहरीले लगायो १५४८ सवारी साधनमा ‘ह्वील लक’
सडकमै दिसापिसाब गराउने प्रवृत्ति सु्धार गर्नुपर्छ भन्ने चेत महानगरीउ सभ्यतामा अझै पनि पलाएकै छैन। यो चेतनाविहीन कार्यलाई सुभार गर्न कुकुरधनी स्वयंको सोचमा सुधार नआउन्जेल त्यति सहज नभएको कतिपयको भनाइ छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
ट्याग्स: dOG, kathamandu